Faahfaahin: Alshabaab oo weerar xoog leh ku qaaday Saaka Deegaanka Bariire – Hornafrik Media Network
Wararka kaimanaya gobolka Sh/hoose ayaa sheegaya in dagaalyahano ka tirsan Alshabaab ay weerar is qarxin iyo mid toos ah ku qaadeen saldhig ay ciidamada dowlada Soomaaliya ku lahaayeen deegaanka Bariire.
Weerarkan oo dhacay waaberigii hore ee saaka ayaa socday muddo, waxaana dadka ku sugan deegaanada ku dhow dhow Bariire ay sheegayaan in qaraxyo waaweyn ay maqleen, dagaal xoog lehna kadib uu xigay.
Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay ciidamada dowlada ee ku saabsan dagaalka Bariire oo ah deegaan muhiim u ah labada dhinac ee ku dagaalamaya.
Hase yeeshee warbaahinta Alshabaab taageera ayaa sheegaya in ay la wareegeen saldhigga ay ciidamada dowlada ku lahaayeen Bariire, ayna halkaa ku qabsadeen gaadiid dagaal.
Afhayeenka howlgalada ururka Alshabaab, Abdicasis Abu Muscab ayaa u sheegay wakaalada wararka Reuters in ay ku dileen weerarka ay ku qaadeen Bariire 17 askari, ayna gacanta ku dhigeen illaa 7 gaadiidka dagaalka ah.
Guddoomiye Ku Xigeenka Gobolka Shabeelaha Hoose, Cali Nuur ayaa xaqiijiyay in uu dagaal ka dhacay Bariire oo Koofurgalbeed magaalada Muqdisho kaga beegan illaa iyo 50km, balse ma bixin wax faahfaahin ah.
Weerarkan ayaa dhacay kadib markii shalay ay isaga baxeen deegaanka Bariire ciidamo ka tirsan AMISOM iyo ciidamo kale oo ajaaniib ah.
Taliyaha Ciidanka Turkey Oo Muqdisho Soo Gaaray. Muxuu La Xiriiraa Socdaalkiisa,?